के कारण्ले आउँछ श्वासबाट दुर्गन्ध ? नआउन के उपाय गर्ने ?
बुधबार, साउन ६, २०७८ १२:५९
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। के कारण्ले आउँछ श्वासबाट दुर्गन्ध ? नआउन के उपाय गर्ने ? मानिसको स्वासको दुर्गन्ध हुनुमा मुखको सरसफाइमा कमी या कुनै ठूलो रोगको लक्षण समेत हुन सक्छ। यसैले मुख गन्हाउने समस्यालाई हल्का ढंगले लिनु हुँदैन।
किन मुखबाट गन्ध आउँछ ? चिकित्सकका अनुसार मुख गन्हाउने समस्या खानपानसहित अन्य केही स्वास्थ्य समस्याका कारण देखा पर्छ। यसबाट सजिलै छुटकारा पनि पाउन सकिन्छ। भनिन्छ, धेरैजसो अवस्थामा पाचन क्रिया सही नभएपछि मुखबाट दुर्गन्ध आउँछ। वास्तवमा खानाको रस पेटभित्र कुहिन थालेपछि मुखबाट दुर्गन्ध आउने हो।
यसका साथै कब्जियत, पेटमा घाउ, अत्यधिक रक्सी सेवन, दाँत तथा गिजाको समस्या भएकाहरूमा मुख गन्हाउने समस्या हुन्छ। यसरी मुखबाट दुर्गन्ध आउनुका कारणमा दाँतमा फोहोर जम्नु, टन्सिलको इन्फेक्सन हुनु, नाक या साइनसमा विकार आउनु, मुखमा घाउ निस्कनु, श्वासनली या फोक्सोको विकार हुनु आदि मानिन्छन्।
मुख गन्हाउने समस्याबाट कसरी बँच्ने ? श्वास गन्हाउने समस्या भएमा दिनमा दुई पटकसम्म दाँत माझ्नुहोस् । विहान उठ्नेबित्तिकै र बेलुकी खाना खाएपछि दाँत ब्रस गर्दा यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ । दाँत माझ्दा जिब्रोलाई पनि राम्रोसँग घोट्नुहोस् । ब्रसले घोट्दा जिब्रोमा अल्झिएका व्याक्टेरिया बाहिर आई केही हदसम्म दुर्गन्धबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ । विशेष गरी जिब्रोको टुप्पो र टन्सिल रहेको ठाँउमा यस्ता व्याक्टेरिया रहेका हुन्छन् । एक अध्ययनअनुसार जिब्रोलाई ब्रसले घोट्दा मात्रै मुखको दुर्गन्ध ७० प्रतिशतले घट्छ ।
पर्याप्त दही खानुहोस् । दहीले नराम्रो व्याक्टेरिया मारिदिने भएकाले खाना खाइसकेपछि नियमित दही खाँदा पनि श्वासको दुर्गन्धबाट मुक्ति मिल्छ । श्वासलाई स्वच्छ बनाउन चुइगम, सुकमेललगायतका चिज पनि चवाउन सकिन्छ । त्यस्तै हर्बल टी र दालचिनीको सेवनले पनि केही हदसम्म मुक्त पाउन सकिन्छ । ताजा स्वच्छ फलफूल स्याउ, केरा, सुन्तला, गाँजर र काँक्रो खानुहोस् ।
बिहान लामो समयसम्म भोकै नबस्ने । पौष्टिक खाजा खाने । मुखबाट बढि नै गन्ध आउँछ भने तुलसीको पात चपाएर रस निल्ने । भोजनपछि आधा चम्चा सोँफ चपाउनु राम्रो हुन्छ । यसले दुर्गन्ध हटाउनुका साथै पाचन क्रियालाई समेत सुधार्छ । चुइंगम चपाउनु पनि मुखको दुर्गन्ध कमगर्ने अर्को सजिलो उपाय हुनसक्छ । मुखबाट दुर्गन्ध आउने समस्या बढि नै हुनथाल्यो भने दन्तचिकित्सक सँग चेकजाँच गराउनु उपयुक्त हुन्छ । एजेन्सी